China Products assembling mpanamboatra sy mpamatsy | Mestech
Mestech dia manome ny mpanjifa vokatra manangona serivisy amin'ny vokatra elektronika, fitaovana elektrika, fiarovana ary vokatra nomerika, ao anatin'izany ny fanamboarana ny ampahany, ny fividianana, ny fanangonana vokatra vita, ny fitsapana, ny fonosana ary ny fandefasana.
Rehefa nanome faritra plastika, singa vy ho an'ny mpanjifa, ny MESTECH dia manolotra serivisy fanangonana vokatra ho an'ny mpanjifa ihany koa, izay tsy manana ozinina manokana na tsy mahita mpamokatra eo an-toerana miaraka amin'ny vidiny mifaninana na teknolojia mahay. Ity dia ampahany iray amin'ny serivisinay rehetra.
Inona no atao hoe fanangonana vokatra
Ny Assembling dia ny dingan'ny fampifangaroana ireo singa vita ho lasa fitaovana feno, milina, rafitra na singa iray amin'ny milina .Izany no dingana lehibe ahazoana vokatra miaraka amina asa sasany.
Ny Assembling no dingana fototra amin'ny fizotry ny famokarana manontolo. Ahitana andiana hetsika, toy ny fandikana ny hevitry ny famolavolana, ny fandaminana ny fizotrany, ny fandaminana ny famokarana, ny fizarana ara-pitaovana, ny fandaminana ny mpiasa, ny fivorian'ny vokatra, ny fitsapana ary ny fonosana. Ny tanjona dia ny hahazoana vokatra mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpamorona mialoha, ny kalitaony ary ny vidiny.
Product assembling dia rafitra injeniera rafitra, izay ahitana andiana fitantanana fandaminana sy hetsika fizika teknika, ao anatin'izany:
Fampidirana ny tetikasa
2. Bilila fanomanana ara-pitaovana
Fividianana materialy, fitehirizana
4.Fomba fiasa momba ny fenitra
5. Fahaiza-miasa sy fiofanana momba ny mpandraharaha
6. Fanaraha-maso sy fahatokisana
7.Device sy fitaovana
8. Fitaovana sy fitsapana
Fikorianan'ny dingana fanangonana vokatra
Andalana fivorian'ny vokatra ao amin'ny Mestech
Vokatra amboarinay ho an'ny mpanjifantsika
Finday tsy misy tariby
MESTECH dia nanolotra serivisy fanangonana ho an'ny mpanjifa maro amin'ny firenena maro. Nanangona traikefa manan-karena amin'ity sehatra ity izahay nandritra ny taona maro. Manolotra anao amin'ny fo manontolo serivisy mijanona iray avy amin'ny famolavolana vokatra, fanodinana ampahany hatramin'ny fivorian'ny vokatra vita izahay. Ireo izay manana filàna sy fanontaniana dia mba lazao aminay amin'ireto fifandraisana manaraka ireto.
Previous: Famolavolana tsindrona resina ABS
Manaraka: Volavola bobongolo
Mivory fivoriambe vokatra
Antenimieram-bokatra solosaina solosaina
Fivoriambe elektronika ho an'ny mpanjifa
Fivoriamben'ny vokatra ao an-trano
Fivoriamben'ny vokatra peripheral finday
Fanamafisana elektrika sy plastika plastika
Trano fampitaovana herinaratra indroa
Double-tsindrona tantera-drano plastika tranga ny int ...
Famolahana tsindrona boaty fitehirizana plastika azo stackable